Isahluko 93 | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Manje ngizohlanganyela ngezimo ezithile ezibandakanya ukufika kwabamazwe angaphandle, ukuze nibe nolwazi lwangaphambili ngakho, nilungise konke ukuba kufakazele igama Lami, niyoma phezu kwabo futhi nibabuse. (Ngoba omkhulu kakhulu phakathi kwabo usengomncane kakhulu phakathi kwenu, ngisholo ukuthi nime phezu kwabo futhi nibabuse.) Laba bantu bonke bazuze isambulo sikaMoya oNgcwele futhi kamuva bonke bazoqoqanela ndawonye eChina, kube sengathi kulungiselelwe ngaphambili. Udrako omkhulu obomvu uthathwa engazelele bese ezama ukwenza konke okokuzabalaza, kodwa khumbulani into eyodwa! Uhlelo Lwami lokuphatha selufezeke ngokuphelele, futhi akukho nto namuntu olokotha avimbe izinyathelo Zami. Ngibanika isambulo Sami ngazo zonke izikhathi, futhi benza ngokulandela ukuqondisa kukaMoya oNgcwele. Nakanjani ngeke bezwe izibopho zikadrako omkhulu obomvu, ngoba Kimi konke kuwukudedela nenkululeko. Ngilungiselele zonke izinto ngokufanele, ngilinde ukuthi nilungise umsebenzi wokulungiselela ukubelusa. Bengihlala ngisho lokhu kini esikhathini esedlule, kodwa iningi lenu lisakholwa ngokuyingxenye. Siyini isimo Manje? Nididekile, akunjalo?
Okwedlule: Isahluko 92
Okulandelayo: Isahluko 94